Daawo: Munaasabad Balaaran oo ka dhacday Dugsiga Hoose, Dhexe ee Al-Qalam ee Degmada Baledxaawo. – Gedo Times
28th February 2016 admin Wararka Maanta 3
maalmihii nasoo dhaafaywaxaa xaflad lagu qabtay dugsiga hoose dhexe ee Alqalam ooku yaalao degmada Beledxaawo. xaflada oo loo qabtay ardada waxkubarato iskuulka oo ku saabsanayd furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee u bilowday iskuulka waxaa ka soo qayb galay ardada iskuulka dhigata, maacalimiinta iskuulka, Maamulka iskuulka , gudiga iskuulka, waalidiin, iyo marti sharaf fara badan.
xaflada waxaa lagu bilaabay aayadaha qur,aanka kariinka ah , kadib ardada iskuulka waxku barato ayaa soo bandhigay barnaamij cilmiyeed isugu jiro: khudbado kala duwan ooku baxayo sadexda luqadood ee ardadu waxku barato, xiwaaro, iyo wada sheekaysi , halxiraale iyo bandhig-cilmiyeed looga hadlayo cilmiga iyo sharafkiisa, jahliga iyo waji xumada uu leeyahay.
waxaa kale ooka hadlay maamulaha iskuulka M. cabdifitaax M. maxamed oo si hufan u sharaxay taariikh koobana ka bixiyey iskuulka, iyo marxaladiisa waxbarasho ee uu hada marayo isaga oo sheegay in calaaskii sideedaad ee dugsiga dhexe ay aradada u horayso ka qalin jabindoonaan sanadka soo socdo, hadii Allaah yiaarhdo oo ardadaa ka qalinjabindoonta iskuulka ay waxbarashadooda sare kasii wadadn doonaan isla iskuulka lana furi doono dugsi sare oo uu yeesho iskuulka Alqalam.
sidoo kale waxaa ka hadlay macalimiin, waalidiin, iyo marti sharaf oo si wanaagsan usoo dhaweeyey barnaamij cilmiyeedka ay soo jeediyeen ardada, waxayna u mahad celiyeen macalimiinta, iyo waalidka iskuulka.
Dugsiga hoosedhexe ee Alqalam oo mustaqbalka dhaw la rajaynayo in uu yeesho dugsi sare wuxuu kamidyahay iskuulada hoos yimaadao Mu,asasada Alqalam ee fadhigeeda ku yaalo Garbahaareey, waana Mu,asaso waxbarasho oo mudo 10sano iyo dheeraad ah ka hawlgasho iskuulo kuyaalo qaybo kamid,ah magaalooyinka Gobolka Gedo.